April | 2016 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
ဘာသာရေးအဓိဂရုန်းတွေလှုံ့ ဆော်နေတာ..ဘယ်သူက ညွှန်ကြားနေတယ်ဆိုတာကို….လက်သယ်…ဘယ်သူဆိုတာကိုတော့….ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ..သုံးသပ်ကြပါတော့
April 30, 2016 drkokogyi
Than Htut Aung .
April 28 at 7:25am ·
April 30, 2016 April 30, 2016 drkokogyi
ထွန်းထွန်း|April 28, 2016
စစ်အစုိုးရလက်ထက်တွင် နုိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကုို အဓိက ဖမ်းဆီးထောင်ချရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် အရေးပေါ် စီမံမှု အက် ဥပဒေနှင့် နုိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ ၂ ခုကို ဖျက်သိမ်းမည့် ဥပဒေကြမ်းများကုို လာမည့် လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပုံစံ(နိုင်-၆(က)) ခေါ် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ကိုင်ဆောင်သူများသည် မိမိတုိ့ကိုယ်မိမိ တင်းပြည့်နိုင်ငံသားသယောင်သယောင် ဝင့်ကြွားနေမှုများသည် တည်ဆဲဥပဒေများကို နားမလည်ဘဲ ဂုဏ်မောက်နေမှုသက်သက်သာ ဖြစ်ပေတော့သည်
M-Media သူ့အမြင်ကဏ္ဍ ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၆ ဆောင်းပါးရှင် – မောင်သာ.K
၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ အခန်း(၂)တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မ ၃ မှ ပုဒ်မ ၂၂ အထိ ပြဌာန်းပါရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ပုဒ်မ-၂(ခ)တွင် နိုင်ငံသားဆိုသည့်စကားရပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားကို ဆိုလိုကြောင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ထိုဥပဒေပုဒ်မ-၂(စ)တွင် နိုင်ငံသားလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်(ရွေးချယ်ရေး)အက်ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအက်ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ဤဥပဒေအရဖြစ်စေ ထုတ်ပေးသော နိုင်ငံသားလက်မှတ်ကို ဆိုသည်ဟုလည်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားပါသည်။
ဘာသာပေါင်းစုံ သဟဇာတ ဖြစ်စေမည့် ဥပဒေပေါ်လာရေး အလေးထား ဆောင်ရွက်မည်ဟုဆို
ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၆ M-Media
– မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဘာသာပေါင်းစုံ သဟဇာတ ဖြစ်စေ သည့် ဥပဒေတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာစေရန် အစိုးရ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့စည်းများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်မည်ဟု မေတ္တာစက်ဝိုင်း (Interfaith) စုပေါင်းအဖွဲ့က ပြောကြားလိုက်သည်။
ဇေကမ္ဘာဝန်ထမ်းများက သင်္ကြန်ရက်အတွင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ဖျက်ဆီးခဲ့
M-Media ဧပြီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၆
ဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှုကို ဥပဒေနဲ့ တင်းကျပ်ဖို့လို
ဘာသာပေါင်းစုံ သဟဇာတ ဖြစ်တဲ့ ဥပဒေတွေ အသက်ဝင်လာဖို့ ကို အဓိက လိုအပ်
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး လှုံဆော်မှု ပြဿနာတွေ ကို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း ရာမှာ ဥပဒေပိုင်း အားနည်းချက်တွေ ရှိတယ်ဆိုပြီး ဘာသာပေါင်းစုံ သဟဇာတ ဖြစ်ရေး နှီးနှောဖလှယ်တဲ့ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက် လာသူတွေက ပြောပါတယ်။
Former General Tin Oo’s clever answer to avoid comitting CRIMES AGAINST HUMANITY and smart dodging of Racist Military’s attack ရိုဟင်ဂျာ မရှိဘူးလို့ NLD အစိုးရသစ်က သတ်မှတ်ထားပါတယ်လို့ သူရ ဦးတင်ဦး (NLD နာယက) က ပြောဆို???
စစ်တွေကလှေမှောက်တဲ့ကိစ္စ အမေရိကန်သံရုံးရဲ့ကြေညာချက်မှာ ရိုဟင်ဂျာလို့သုံးနှုန်းခဲ့တာကို နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနဲ့ သဘောထားကို အသိပေး ထုတ်ပြန်ဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး NLD နာယက သူရဦးတင်ဦးကို RFA အဖွဲ့သူ မခင်ခင်အိ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။